बुधबार १९ मङ्सिर, २०७५ Thursday, 02 December, 2021
सरकार १० हजार बढी एचआईभी सङ्क्रमितबारे बेखबर, जोखिम झन् बढ्यो access_timeमंसिर १४, २०७८
१४ मङ्सिर, काठमाडौँ । सरकार दश हजार भन्दा बढी एचआईभी सङ्क्रमितको अवस्था बारे बेखबर छ । ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू सरकारको रेकर्डमा नहुँदा सङ्क्रमण फैलने उच्च जोखिम बढेको छ । नेपालमा हाल ३० हजार ३०० जना सङ्क्रमित छन् । जसमध्ये पुरुष १६ हजार ३१४ अर्थात् ५४ प्रति...
‘ओमिक्रोन’ भेरियन्टले थपिएको चुनौती access_timeमंसिर १२, २०७८
दक्षिण अफ्रिकामा (कोभिड–१९) भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ भेटिएपछि सरकारले सतर्कता अपनाउने तयारी थालेको छ । ‘ओमिक्रोन’ को रोकथाम लागि पूर्वतयारी बारे कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय समितिको बैठक बसिरहेको प्रवक्ता सुनिता...
धूम्रपानले बढायो हृदयाघातको दायरा access_timeमंसिर ११, २०७८
नेपालमा सन् २००३ मै सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणसम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गरे पनि नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । परिणामस्वरूप नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगका कारण हुने मृत्युदर बढ्दै गएको छ । १४.९ प्रतिशत मानिसको मृत्युको कारण सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन न...
राष्ट्रिय महिला आयोगले यसरी मनाउँदै छ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान access_timeमंसिर ९, २०७८
‘घरैबाट सुरु गरौँ, महिला हिंसा अन्य गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ बिहीबारदेखि लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान राष्ट्रिय महिला आयोगले विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउन सुरु गरेको छ । लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको आज पहिलो दिन दिउँसो...
के एचआईभी संक्रमित आमाबुवाबाट जन्मन्छन् स्वस्थ बच्चा ? access_timeमंसिर ८, २०७८
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुको एआरटी सेन्टरमा दैनिक सरदर ३२ जना एचआईभी संक्रमित औषधि र परामर्श लागि आउने गर्छन् । साथै, एचआईभी परीक्षणका लागि दैनिक २० जनाभन्दा बढी पुग्ने गर्छन् । सो अस्पतालकी मेडिकल अफिसर डा.लीना देवकोटा एचआईभी संक्रमित आमाबुवाबाट जन्...
जाडोमा छालामा सुक्खापनको समस्या : कारण र समाधान access_timeमंसिर ५, २०७८
जाडो याम सुरु भएको छ । जाडोमा धेरैले भोग्ने थुप्रै समस्यामध्ये छालामा हुने सुक्खापन पनि हो । जाडोमा खासगरी छाला रुखो हुने, हात गोडा फुट्ने, छाला चिलाउने, छालाको पत्र निस्कने, अनुहारमा चाया—पोतो आउने लगायत समस्या हुन्छ । यस्तै टाउकोमा चाया पर्ने गर्दछ । ...
काठमाडौँका सडकमा १ लाख बेवारिसे कुकुर, चुनौती बन्दै रेबिज access_timeमंसिर ४, २०७८
नेपालमा बेवारिसे लाखौँ कुकुरका कारण रेबिज रोग चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा मात्रै १ लाख बेवारिसे कुकुर छन् । ती सबै कुकुरलाई रेबिजविरुद्धको खोप लगाइएको छैनन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मुख्य सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्र...
आजदेखि दीर्घरोगीलाई फाइजर खोप : क–कसले लगाउन पाउँछन् ? access_timeकात्तिक २८, २०७८
कोरोनाविरुद्धको फाइजर खोप आइतबारदेखि १२ वर्षभन्दा माथिका दीर्घरोगीलाई लगाइने भएको छ । कार्तिक २८ देखि मंसिर ४ गतेसम्म दीर्घरोगीलाई यो खोपको पहिलो मात्रा लगाइने छ । यो खोप पहिलो मात्रा लिएको २१ देखि २८ दिनपछि दोस्रो मात्रा दिइने छ । दोस्रो मात्रा मंसिर २७ देखि ...
आइतबारदेखि दीर्घरोगीलाई फाइजर खोप लगाइने, कस्ताले पाउँछन् खोप लगाउन ? access_timeकात्तिक २६, २०७८
कोरोनाविरुद्धको फाइजर खोप कार्तिक २८ गतेदेखि १२ वर्षभन्दा माथिका दीर्घरोगीलाई लगाइने भएको छ । कोभ्याक्स सुविधामार्फत आएको फाइजर खोप करिब ५० हजार दीर्घ रोगीले पाउने स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालले जानकारी दिए । यो ...
हैजा फैलिएको महिना दिनपछि बल्ल खोप ल्याउँदै सरकार access_timeकात्तिक २६, २०७८
गत असोज १८ देखि कपिलवस्तुमा फैलिएको हैजाका कारण ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । महामारी फैलिएको एक महिनापछि बल्ल सरकारले हैजाविरुद्धको खोप ल्याउन लागेको छ । सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) बाट स्वीकृत प्राप्त गरेसँगै हैजाको खोप ल्याउन लागेको हो ।...
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् भन्छ, ‘अब बुस्टर खोपको अध्ययन सुरु गरौँ’ access_timeकात्तिक २५, २०७८
धेरै यूरोपियन देशहरूले कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएकाहरूलाई बुस्टर खोप अर्थात् अतिरिक्त मात्रा दिन सुरु गरेका छन् । पूर्ण मात्रा खोप लगाएकाहरूको एन्टीबडी क्रमशः घट्दै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदद्वारा गर...
‘महिला आयोगमा विधिसम्मत आएका हौँ, अदालतले के गर्छ थाहा छैन’ access_timeकात्तिक २२, २०७८
राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक आयोगमध्येको एक हो । संविधान बनेपछि यो आयोग चार वर्षसम्म पदाधिकारीविहीन रह्यो । पूर्ववर्ती ओली सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम घडीतिर आइपुग्दा ०७७ माघ २१ गते आयोगको अध्यक्षमा एमाले नेतृ कमलाकुमारी पराजुली नियुक्त भइन् । पराजुलीसँगै आयो...
जाडोमा हाडजोर्नी समस्याबाट यसरी बच्न सकिन्छ access_timeकात्तिक २२, २०७८
जाडो याम सुरु भइसकेको छ । यस मौसममा हाडजोर्नी समस्याले खासगरी वृद्धवृद्धालाई सताउँछ । बाथका रोगीलाई पनि जाडोमा बढी समस्या देखापर्ने हाडजोर्नी विषेशज्ञहरूको भनाइ छ । जब चिसो बढ्छ, जोर्नीहरूको दुखाइ पनि बढ्छ । गर्मीभन्दा चिसोमा जोर्नीहरूमा अररोपन बढी हुन्छ । त्यसरी...
आफ्नाबाटै असुरक्षित : नेपालमा किन बढ्दैछ हाडनाता करणी ? access_timeकात्तिक २०, २०७८
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय हाडनाताभित्र जबरजस्ती करणीका घटना बढ्दै गएको छ । हाडनाता करणीमा कलिला किशोरी समेत सुरक्षित छैनन् । कतिपयले त परिवारको इज्जत जाने डरले पनि यस्ता अपराधलाई दबाएर बस्ने गरेका छन् । पर्वतमा करिब ६ महिना अघि आफ्नै छोरीलाई बाध्य बनाएर बला...
भाइ मसला : मिठाइको साटो दाजुभाइलाई दिउँ ‘ड्राइफ्रुट्स्’ access_timeकात्तिक १८, २०७८
भाइटीका लगाउँदा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई विभिन्न प्रकारका ड्राइफ्रुट्स् दिने चलन छ । काजु, बदाम, पेस्ता, किसमिस, ओखर, अन्जिर, छोकडा मधेसी बदाम लगायतका ड्राइफ्रुट्स् भाइ मसलाको रुपमा दिने चलन छ । यी ड्राइफ्रुट्सबाट पर्याप्त मात्रा पोषण तत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ । सन्तुलित तव...
४८ लाख बालबालिकाले कहिले पाउँछन् कोरोनाविरुद्धको खोप ? access_timeकात्तिक १०, २०७८
सरकारले कार्तिक २८ गतेदेखि बालबालिकालाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिने निर्णय गरेको छ । यद्यपि कोरोनाविरुद्धको फाइजर खोप सबै बालबालिकाले भने पाउने छैनन् । १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका दीर्घरोगीलाई खोप दिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निश्चित गरेको हो । फोक्...
काटेको मासु किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुस् access_timeअसोज २६, २०७८
बडादसैँमा धेरैका घरघरमा पाक्ने खाद्य पदार्थमध्ये एक हो मासु । तर, मासु छनौट गर्दा, काट्दा वा पकाउँदा धेरै कुरामा ध्यान पु–याउनुपर्ने पोषणविद् प्राडा.उमा कोइराला बताउँछिन् । सुरक्षित तरिकाले मासु नखाएमा उल्टै बिरामी पर्न सकिने प्राडा.कोइरालाको भनाइ छ । मासु ख...
खसी, राँगा किन्दै हुनुहुन्छ ? निरोगी यसरी चिन्नुहोस् ! access_timeअसोज २४, २०७८
मुख्य चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा काठमाडौँ उपत्यकासँगै देशका मुख्य सहरमा खसी–बोका, च्याङ्ग्रा, राँगा–भैँसी र कुखुरा भित्रने क्रम जारी छ । पशुपन्छीहरूको बजारमा किनबेच तथा मोलतोल गर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । अन्य चाडपर्वमा भन्दा दसैँमा मासुको खपत दोब्बर हु...
नेपालमा ११ लाखभन्दा बढी मानसिक रोगी access_timeअसोज २४, २०७८
नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ४ प्रतिशत मानिस मानसिक समस्याबाट ग्रसित रहेको पाइएको छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०७७ का अनुसार कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९० लाखको ४ प्रतिशत मानसिक रोगी रहेका छन् । नेपालमा किशोर किशोरीहरूलाई समेत मानसिक रोग देखिएको सर्वेक्षणले देखाएक...
राजनीतिक दलहरुबाटै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लंघन access_timeअसोज १६, २०७८
काठमाडौं । कोरोनाभाइरस (कोभिड¬–१९) संक्रमणको जोखिम कायम छ । संक्रमण दर कम भए पनि जोखिम कायम रहेकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा अपिल गर्दै आएको छ । सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम कायम रहेकाले...
सेवासुविधा बढेपछि सिभिल अस्पतालका नर्स हर्षित access_timeअसोज १३, २०७८
निजामती कर्मचारी (सिभिल) अस्पतालले एकतर्फी रुपमा सेवा सुविधा र करार कार्यविधि ल्याएको भन्दै कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । डक्टर्स एसोसिएशन अफ सिभिल हस्पिटलले हालको सेवा सुविधालाई परिमार्जन गर्न अस्पतालसँग माग गरेको छ । तर, आर्थिक वर्ष ०७८/०८९ को साउन महिनाब...
लिभिङ टुगेदर : सम्बन्धमा दरार आएपछि प्रेमीले प्रेमिका नै चिन्दैनन् access_timeअसोज १०, २०७८
डेढ वर्षसम्मको प्रेम सम्बन्धपछि विशाल पौडेल र रिना मगर (नाम परिवर्तन) ‘लिभिङ टुगेदर’ बस्न थाले । विगत दुई वर्षदेखि उनीहरु लिभिङ टुगेदर बस्दै आएका थिए । पारिवारिक सहमतिबिनै लिभिङ टुगेदर बसेका उनीहरुबीच यतिबेला सम्बन्धमा दरार आएको छ, र, यो विवाद महिला आ...
विद्यालय धमाधम खुल्न थाले, बालबालिकाले कहिले खोप पाउने ? access_timeअसोज ६, २०७८
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी प्रभावित हुने चेतावनी विज्ञहरुले दिँदै आएको अवस्थामा विद्यालयहरु धमाधम खुल्न थालेको छ । हिन्दुहरुको महान् चाड बडा दसैँका लागि तीन सातामात्र बाँकी रहँदा काठमाडौं उपत्यकासँगै देशका ठुला शहरमा विद्यालयमा भौतिक उप...
वृद्धवृद्धाले असामान्य व्यवहार देखाए अल्जाइमर हुन सक्छ access_timeअसोज ५, २०७८
कास्कीका महेशबहादुर क्षेत्री उमेरले ७३ वर्षका पुगे । उमेर बढेसँगै घरबाहिर खासै निस्किँदैनन् । क्षेत्रीलाई भेट्न आउने आफन्तजनदेखि परिवारकै सदस्यलाई आफूले खाना खानै नपाएको पटक पटक सुनाउँछन् । भेट्न गएका आफन्तसँगै खाना, खाजा खाएको एकैछिन पछि बुहारी, छोरा, नातिनतिनाले ख...
बर्खे एलर्जीले सतायो ? यसो गर्नुस् access_timeअसोज २, २०७८
के तपाईलाई छाला चिलाउने, डाबर आउने, शरीरमा कन्याउँदा घाउ भएर रातो दाग देखिएको त छैन ? यदि त्यस्तो समस्या छ भने तपाईलाई ‘एलर्जी’ भएको हुन सक्छ । बर्खा लागेसँगै करिब चार महिनादेखि बारम्बार पानी परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा धेरैलाई एलर्जीको स...